खनियावासलाइ देशकै नमुना गाउँपालिकाकाे रूपमा अगाडि बढाउँदै छाै : अध्यक्ष तामाङ – Lekbesi Khabar
खनियावासलाइ देशकै नमुना गाउँपालिकाकाे रूपमा अगाडि बढाउँदै छाै : अध्यक्ष तामाङ
राज्य पुर्नसंरचना र स्थानीय सरकारको क्रियाशीलता पश्चात् ग्रामीण क्षेत्रहरुको केन्द्रसँग दूरी घट्दै गएको छ । नितान्त मौलिक विकासका अभ्यासहरु पनि देखिएकाछन् । दूर दराजमा रहेका भूगोल पनि बाहिरी संसारसँग जोडिदै गएका छन् । स्थानीय सरकार बनेपछि विकासका संभावनाहरु कसरी स्थानीय जनसमुदायको पहुँचमा पुगेको छ र आफ्नो गाउँपालिकालाई कसरी विकासको आलोकले सिंगार्न सकेका छन् ?
आज हामी यस्तै सवालमा धादिङ जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा अबस्थित खनियावास गाउँँपालिकाका अध्यक्ष रणबहादुर तामाङकाे धारणहरु जान्ने कोसिस गरेका छौं । तत्कालीन सत्यदेवी गाविस स्थित गोम्बोङ्ममा जन्मिएका तामाङ राजनीतिक भन्दा ज्यादा समाजसेवी व्यक्तित्व हुन् । समाजसेवाकै लगाव र उनले त्यस क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानले नै उनलनई अहिले गाउँपालिकाको अध्यक्ष बन्न सहज भएको छ । अध्यक्ष र तामाङसँग गरिएको कुराकानीकाे सम्पादित अंश :
प्रश्नः तपाईँ निर्वाचित हुनु भन्दा अगाडि पालिकाको अवस्था कस्तो थियो ?
उत्तरः नेपाल संघीय शासनमा जानु अगाडि यस क्षेत्रमा तीन गाउँ विकास समितिहरु थिए । साविक दार्खा, झार्लाङ र सत्यदेवी गाउँविकास समितिहरु मिलाएर खनियाबास गाउँपालिकाको जन्म भएको हो । नेपालको एकीकरण अभियानमा खनियाबासमा मुकाम बनाएर यस क्षेत्रका सानासाना राजा रजौटा उन्मुलन गर्न सैनिक क्याम्प राखिएको थियो ।क्याम्प राखिएको खनियोको ठूलो बोटकै संझनामा खनियाबास नाम रहेको छ । त्यसै एतिहासिक स्थलको नामबाट यसको नामकरण भएको हो ।
स्थानीय सरकार निर्वाचित भएर आउनुभन्दा अगाडि यस क्षेत्रमा बाटोघाटो,पुल पुलेसाहरु निकै कष्टपूर्ण अवस्थामा थिए । माननीय पूर्व राज्यमन्त्री दिलमान पाख्रिनको पहलमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट नै निर्धारित दर्खा सडक राजनीतिक पूर्वाग्रहले अहिलेको सरकारले समाप्त बनाएको छ । त्यतिबेला नै सुरु गरिएको डुण्डुरे र लपाङको पुल अहिले पूरा भैसकेको छ ।
त्यतिबेला कृषि,वन, जीवीकोपार्जन, सरकारी शिक्षा, क्षेत्रको अवस्था दयानीय र कहालिलाग्दो थियो । म प्रत्येक जनताको घर घर पुगेको छु । त्यहाँको गरिवी ,अभाव र समस्याहरुसँग निकट छु । अझ सातसय खोला पारिको अवस्था त समस्याग्रस्त थियो । मैले ती सबै देखेको र भोगेको छु । भूकम्पले त त्यतिबेला जनतालाई उठ्नै नसक्ने गरि थला पारेको थियो ।
प्रश्न : भूकम्पको बेला कस्तो सहयोग गर्नुभयो
उत्तरः भूकम्पको समयमा मैले आफ्नो जनतालाई नजिकबाट सेवा गर्ने मौका पाएँ । त्यतिबेला नेपाल युथ पाउण्डेसन र त्यसका अध्यक्ष सोम पनेरुले यहाँका घरबारबिहीनलाई जस्तापाता,खाद्यान्न,लत्ताकपडा लगायत सहयोग गर्नुभयो ,बिदेशमा रहेका यस क्षेत्रका दाजुभाइ, दिदीबहिनीले सघाउनुभयो । पूर्वराज्यमन्त्री दिलमान पाख्रिनले आफ्नै खर्चमा हेलिकप्टरबाट घाइतेहरुलाई ेउद्धार गर्नुभयो । घरमा चेपिएका, पुरिएकाहरुलाई निकै साहसपूर्वक नथाकिकन उद्धार गरेका थियौं । त्यसबेला राजनीतिक स्वाथ्र्य कुनै राखिएको थिएन । निस्वाथ्र्यसेवाले राजनीतिलाई प्रत्यक्ष सघाउने रहेछ ।
प्रश्नः पालिकाभित्रका संभावना र स्रोतहरु के के रहेका छन् ?
हाम्रो पालिका प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न छ । जलस्रोत र जडिबुटी यहाँ प्रशस्त पाइन्छ । सांस्कृतिक र भौगोलिक पर्यटनका दृष्टिले संसारलाई आकर्षित गर्न सक्ने अवस्था यस पालिकामा छ तर बाटो र आवासको उपयुक्त व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । लालीगुराँसको राजधानी भनेर धेरैतिर हौवा फिंजाइएको छ तर हाम्रो पालिकामा एउटै बोटमा विविध रंगका गुराँस फुल्छन् ,१६ भन्दा बढी प्रजातिका गुराँस पाइन्छ त्यसैले पर्यटनको अतुल सम्भावना हामीमा छन् । पशुपालन तथा कृषि व्यवसायका लागि पनि यस पालिकाको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । हाइड्रोपावरका लागि लगानी जुटिरहेको छ । राडीपाखी,स्यामापागा, काष्ठकलाका व्यवसाय पनि चलिरहेको छ । ती व्यवसायलाई प्रवर्धन र व्यवसायीकरण गर्ने योजनामा लागिरहेका छौं ।
प्रश्नः निर्वाचन पछि के के क्षेत्रमा परिवर्तन गर्नुभएको छ
उत्तरः समय धेरै भएको छैन तर परिवर्तन भर्खर भर्खर देखिन थालेको छ । जनताका अपेक्षा निकै छ । निर्वाचनको पहिलो एक वर्ष हामीलाई स्थानीय सरकारका काम कर्तव्य र अधिकारहरु बुझ्न समय लाग्यो । अर्को एकवर्ष कानुन बनाउन र नीतिहरु तयार गर्न समय खर्च भयो । फेरि कर्मचारी नभएर निकै समय अल्मलिनु परेको थियो । जनशक्तिविना काम हुनै सक्दैनथ्यो । ३ वर्ष हाम्रो अभाव अभावले नै बित्यो । अब जग बसिसकेको छ । नीतिहरु सबै बनिसकेको छ । पूर्वाधारहरु तयार भैसकेका छन् । सडक सबै वडा कार्यालयमा पुगिसकेको छ । डुण्डुरे र लपाङ फेदीमा पक्कीपुल बनिसकेको छ । अब किन्ताङ फेदीमा पुल बन्न बाँकि छ । त्यहाँ पुल बनेपछि दर्खा, सत्यदेवी,झर्लाङ सबैतिर सदावहार यातायात चल्ने व्यवस्था हुँदै छ ।
हाम्रो पालिका साँस्कृतिक धरोहरका दृष्टिले धनी छ । करिव एक हजार वर्षभन्दा पुरानो गिलिङजो गुम्बा,सिङ्ल्हादेवी,फलाम तँगारो,तातोपानी,सत्यदेवी,मोतीगुफा,घले दरवार जस्ता धरोहरहरु पनि यहाँका साँस्कृतिक आकर्षण र अध्ययनीय क्षेत्रहरु हुन् । यी क्षेत्रहरुको डिपिआर तयार गर्ने तथा पूर्वाधारहरु विकास गर्न लागिएको छ ।
प्रश्न : तपाइकाे गाउँपालिका संस्कृतिक एतिहासिक पक्षबाट पनि सबल छ भनिन्छ तर त्यस क्षेत्रमा त काम कम भएको सुनिन्छ नि ?
उत्तर : हाम्रो पालिक एतिहासिक र साँस्कृतिक पक्षबाट पनि सवल छ । नेपालकै दोस्रो पुरानो गुम्बा गिलिङजोदेखि तिब्बतीयन बोन्पोहरुले आफ्नो साधना सिध्द गर्ने सिङल्हादेवीको मन्दिरसम्म यसै क्षेत्रमा रहेको छ । तातोपानीको मूल, तथा तीर्थालय पनि यहाँको संभावना बोकेका धरोहरहरु हुन् । यसको उत्खनन् गर्ने ,अनुसन्धान गर्ने तथा डिपिआर तयार गर्नेकामहरु भैरहेका छन् । पुननिर्माणका सवालमा पुरातत्वविभागसँग केही चरणमा छलफल भएको छ । गुम्बाविकास समितिसँग पनि कुराकानी अगाडि बढेको छ । यसका लागि ताइवानी तथा कोरियन सँस्थाहरुसँग पनि छलफल भैरहेको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारले यस्ता सम्पदाहरुको समवेदनशीलता बुझेर कार्यक्रमहरु दिन सकेन । हामीले आफ्नै किसिमले हाम्रा पुरातात्वीक सम्पदाहरुलाई संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने अभियान चलाएका छौं
प्रश्न : अबको यहाँको लक्ष्य के के रहेको छ ?
शिक्षा पूर्वाधारभन्दा पनि महत्वपूर्ण चिज हो त्यसैले हामीले जगदेखि शैक्षिक सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर पाँच वटा वडामा एक एक नमूना बालविकास केन्द्रहरु स्थापना गरेका छौं र आगामि बर्षदेखि त्यसलाई माध्यमिक तहसम्म नमुना विद्यालय कार्यक्रम लागु गरिनेछ । हाम्रो पालिकाबाट गुणस्तरीय शिक्षाकै लागि भनेर सहरमा डेरा लिएर बालबालिका पढाउन महङ्गो खर्च गरेर बसेका छन् । त्यसबाट यहाँ जग्गा बाँझो बसेको छ भने आर्थिक क्षति पनि बढेको छ । गाउँमै बस्ने, यहाँ नै रोजगारी सिर्जना गर्ने र गुणस्तरीय शिक्षा यहाँ नै दिने लक्ष्य लिएका छौ ।
उद्योग ,कलकारखाना, रोजगारीका लागि पालिकाले दीर्घकालीन रणनीति लिएको छ । प्लाइ उद्योग, हाइड्रोपावर,जडिबुटी प्रशोधनका लागि पनि उद्योगी व्यवसायीहरुसँग परामर्श भैरहेको छ । हाइड्रो पावरको काम अगाडि बढिसकेको छ । अरु कामहरु छलफलकै चरणमा रहेको छ । केही समयमा अन्य कामहरु पनि नीति बनाएर प्रयोग गरिनेछ ।
११ चैत्र २०७७, बुधबार २१:२५ March 27, 2021
नेकपा एमाले विवाद : नेपाल–खनाल आक्रोशित, ओली आक्रामक !
उपत्यकामा वायुप्रदूषणको बाक्लो तुवालो : अझै केही दिन लाग्ने, बाहिर ननिस्किन आग्रह